Sida Loogu Soo Celiyo Bogga Kadib Ciqaabta Google
Waa maxay xukunka ugu horreeya ee la xariira ganaaxyada Google? Marna ha u ogolaanin goobtaada inay gaarto dhibta ay heshohal. Si kastaba ha noqotee, ciqaabtu way dhacaan, ka dibna, darajooyinka iyo gaadiidka baabuurta. Inta badan waxay dhammaantood dhacaan iyada oo aan la ogaan ilaa ay ka soo daahdo. Labadaba, dhibaatooyinkanka tago milkiilayaasha ganacsiyada.
Waxyaabaha ugu horreeya, ee ku yimaada mulkiilaha mulkiilaha goobta waa "Tani waa dhamaadka". Qeybta hooseNatiijooyinka raadinta Google waxay ka dhigan tahay in aad bilowdid wax walba mar kale, taas oo qaadan doonta wakhti iyo lacag ka badan celcelis ahaan webmaster awood u yeelan karto. Inta badan, ma khaldan.Ka soo kabashada ganaaxyada Google waa hab hawleed mudada dheer ee aad leedahay si aad kor ugu qaadato darajooyinkaaga oo aad ku celcelisid habka ugu dheer ee TOP natiijooyinka raadinta. Ma jirto waddo aan ku dhaafnomarxaladan: haddii aadan rabin in aad hesho ganaax kale oo Google ah dhamaadka.
In kasta oo laga soo kabsado ganaaxyada, Sare ,wakaaladda Yurubta SEO, waxay ka digtay qof kasta oo isticmaala in aysan jirin istiraatiijiyad kama dambeys ah ama khiyaano guuleysi leh, oo si dhaqso ah u keeni doonta boosaska boos celinta caadiga ah. Xaalad kasta,waa in aad dhisatid istaraatiijiyad shakhsi ah oo xoogga saaraya in aad ka saarto dhinacyada daciifka ah iyo khaladaadka, taas oo keentay in goobta ay hoos u dhigto, iyo hagaajinta dhinacyadooda ugu xooganka soo qaad ilaha webka ka hooseeya hoose ee raadinta raadinta.
Waayo-aragnimada khubarada SEO-ga ee 'Semalt SEO' oo la shaqeeya milkiilayaasha goobta ku dhuftay rigoore badiyaa ayaa ku wareegsankiisaska dadka ka soo jeeda jahwareer, hay'adaha SEO-ka ee SEO ay la shaqeynayeen ka hor inta aysan u wareegin Semalt. Noocan ah mulkiilayaasha goobta joogeengebi ahaanba kama warhayn dhibaatada ay sameeyeen dhakhaatiirta Black Hat SEO ilaa inta qiimeynta ay bilaabeen inay dhacaan oo ay burburiyaan dhammaan horumarka horumarka ee la gaaraySababtoo ah dadaalada Nabadgelyada
In kasta oo ay xaaladdu u muuqato inay run ahaantii niyadjab tahay, khubarada ayaa ku kalsoonin dib loo soo celiyo..Dib u dheer, adag, laakiin dhab ah dhab ah.
La soco asalka dhibaatada
Haddii wargelinta rasmiga ah ee Google aysan wax caddayn, hubi Tilmaamaha Hagaha Google inaad wax dheeraad ah ka ogaatid sababta Google uu kuu mamnuucay. Haddii aadan helin wax wargelin ah, tag Google Algorithm Isbadel Taariikhda ,oo fiiri in wax isbeddel ah lagu soo rogay algorithm xilliga aad bilowday inaad la kulanto hoos u dhicitaan darajo: tani waa mid ka mid ah kuwa ugu caansansababaha taraafikada iyo darajooyinka hoos loo dhigo
Soo jeedin shakhsi ah oo laga soo diro Semalt waa in la eego dhabarka dambe ee ku yaal goobtaada sida ugu dhakhsaha badan marka la isticmaalo saboolkabacklink tayada ayaa ah xadgudubka ugu caamsan ee xeerarka Google, mulkiilayaasha badana badanaa si buuxda ayay u jilicsan yihiin.
Ka soo qaad khadadka tayada hooseeya
Penguin algorithm waa mid, kaas oo ogaanaya dhabarka xun iyo ciqaab boggaga internetka,taas oo u qaybinaysa. Waxaad dib ugu heli kartaa dhabarkaaga Qalabyada Google Websaytiyaha .Waddada u dhaxaysa iyaga oo u maraya Raadinta Gaadiidka → Xidhiidhka boggagaaga → Yaa ku xidhan kan ugu caansan → Soo rogo xiriirada ugu dambeeyay . Laga soo bilaabo halkaas, waad awoodi doontaasi aad u aragto dhammaan xiriirooyinka ku tiirsan ilahaaga internetka. Laga soo bilaabo halkan, nidaamka isku midka ah ee shabakadaha internetka ayaa bilaabanaya. Tani waa sababta ay dad badani u door bidaanka tagaan hawshaan xirfadlayaasha xirfadlayaasha ah ee SEO ama shaqaaleynta kaalmada dib u eegista qalabyada, kuwaas oo bixiya xog badan oo ku saabsan xiriir kasta.
Qaybta qashinka ah ee juuska ku xiran sida caadiga ah waxay ka kooban tahay:
ilaha webka laga mamnuucay Google
Meelo aan la xariirin shabakadda goobtaada
Meelo ay ku jiraan baaluq ama muuqaal muuqaal ah
Goobta adeegsiga farsamooyinka daboolka
Websaydhyo leh waxyaabo la soo koobay
Kadib markaad fiiriso falanqaynta dhabarka iyo qeexidda ciladaha khaldan, waa inaad isla markiibabeddel dhabarka xun ee leh dib-u-tayo sare oo laga helo ilaha webka ee ka tirsan nuucyada khuseeya. Waxaa wanaagsan in la sameeyo caawimolaga soo bilaabo xirfad dhisme xirfad leh. Si kastaba ha ahaatee, ka hor intaadan sii wadi karin nidaamka bedelka, waxaa muhiim ah in laga takhaluso idaha madow.Tani waa sida aad u sameyso.
Ku qor email u dir websaydh
Badanaa, qof kasta oo websaydh ah wuxuu leeyahay xogta xiriirka ee ku saabsan Nala soo xiriir ama Us About, sidaa daraadeed iyaga u diraya niyad wanaagemail, kaas oo aad weydiisanayso in ay ka soo saarto xiriirkooda ayna si cad u muujiyaan bogga uu ku xiran yahay, ma noqon doonto dhibaato. Iska hubi, si kastaba ha ahaatee, ha u dirin dhowr ahcodsiyada sida) a) haddii webmaster uusan ka jawaabin midka koowaad, dhammaan kuwa ku xiga waxay noqon doonaan kuwo aan la isticmaalin, b) waxay si toos ah kuugu soo diri doontaa shaashadda spam.
Haddii ay tahay website-kaaga shirkadda saamaysay, waxay isticmaalaan cinwaanka emailka ee shirkaddaada, mana aha@ gmail.com si aad u codsato codsigaaga miisaan ka badan. Si aad iskaga nadiifiso iskudhafka hubinta sanduuqyada dakhligaaga, isticmaal qalabka sahanka email-ka Bogagga Google si aad u abaabulato shaqadaada codsiyada emailka ah oo kaa caawinaya inaad wakhtiga kaydsato. Si aad u yara cadcad waxaad arki kartaa inta websaydhku furi doonaan emayladaada iyo inta badan ee aanad samaynwaxay ku dhibeysaa jawaab celin, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u sii wadi karto warbixinnada.
Xasuuso, haddii websaydhu aysan ka saarin xiriirinta ama dalabyada ay ku bixiyaan lacag bixinta, iska indha tiriiyaga oo bilaabi nidaamka naafanimada
Ka fogow domains xun
Isticmaal qalabkaaga koontaroolka backlink si aad ugu soo uruuriso dhabarka ku soo laabo warbixinta aan ka baxsanayn. Qalabka sida Soo celinta Dib-u-celinta u oggolow in ay ku daraan tiirar ay isku xiraan kadibna ayagoo isku haleynaya hal qayb, hal qayb. Qalabka ayaa sidoo kale u suurtogeliya soo dhoofinta dhamaan boggaga dib u celinta ee warbixinta, kaas oo la soo gudbin karo Jahawiyo Xiriirka Xiriirka .
Marka xigta, waxaad riixdaa Jebiya Xiriirada .
Inay maskaxda ku hayso: Qalalinta Qalabka Xiriirku waa munaasabada ugu dambaysa. Isticmaal kaliya markaad daal dhan tahaytallaabooyinka, mana lahaan wax macquul ah oo looga takhalusi karo tayada liidashada tayada liita. Sidoo kale, qalabkani ma ballanqaadayo natiijo dhakhso leh: isugeynta isbeddelka lagu muujinayo in lafaguriddu qaado waqti, iyoTaas ka dib, botigu waa in uu ansixiyaa isbedeladaan.
Macluumaadka la isku daray
Tani waa sabab kale oo ah mamnuucidda Google, iyo natiijada ka soo shaqeynta hay'adaha SEO tayada liita, taas oosi sahlan u duub bogga internetka ee kale, iyaga oo aaminsan in macaamiishooda aysan waligood ku mashquulin in ay sameeyaan cilmi baaris ama si ay u hubiyaan midnimada mawduuca. Inkiiskan, qorayaasha waa inaad ku qortaa 100% asalka dhabta ah si aad u bedesho nuqul nuqul ah, sharaxaadyo, iyo boggaga bogga si aad dib ugu hesho Googlefiraaqo wanaagsan iyo dib u cusbooneysiinta kobcinta darajooyinka
Nadiifinta tirada xad-dhaafka ah ee ereyada muhiimka ah ee ka kooban bogga, tagska metad, image sifooyinka ALT,cinwaanada, xitaa bogga iyo boggaga 'URL' waa hawl culus oo la socdo hawl kale oo muhiim ah oo ah in la galo saamiga saxda ah ee ereyada muhiimka ah ee qoraalka.Xaalado badan, Semalt waa in ay dhisto kernel cusub oo macquul ah si ay u siiso goobta bilow cusub..Mararka qaarkood, ereyada muhiimka ah ayaa laga soo saari karaa semantic horeKernel (waxaa la siiyaa hal), laakiin inta badan wax walba waa inuu tagaa.
Ka saarida sababaha ugu wayn ee ganaaxa Google aan ku filnayn dib u soo kabashada buuxda. Waa lagama maarmaanmarxaladda nadiifinta, ka dib markaa marxaladda goobaha fog ee goobta iyo goobaha dib-u-habeynta dib-u-hagaajinta waa inay raacaan:
Dhismaha xiriirka Xitaa marka dhabarka xun uusan ahayn, goobta weli wiiqantayiyadoo qiimeyntu lumisay, sidaas darteed waxay u baahan tahay dhammaan taageerada laga helo ilaha awooda aga ah ee ay heli karto.
SMM. Hawlaha warbaahinta bulshada ayaa si xoog leh u kobciya gaadiidka iyo kalsoonida goobta,waana tan oo ah meel aad u culus oo baahi weyn leh. Ololaha si fiican u horumarsan ee Twitter, Instagram ama Facebook ayaa gacan ka geysan doona sidii loo kobcin lahaa goobta oo la siin lahaamartida loo daayo
Dhammaystirka dib-u-dhiska goobta hore Waa inaad sameysaa, si buuxda looga saaro farsamadaarrimaha iyo khaladaadka ay sameeyeen SEO-ga "xirfadlayaal". Mararka qaarkood waxyeelladu waa mid aad u ballaaran, marka dib-u-dhisku wuxuu noqdaa ikhtiyaarka ugu haboon ee ilaalinayawax khaladaad ah ama arimo lama soo gudboonaan doono
Ololayaasha suuqgeynta internetka Marka Google u arko boggaga aan ku kalsoonayn, tooska ahwaajibaadku waa inuu ku guuleysto kalsoonidaas. Waxaad u baahantahay inaad faafiso wacyiga ku saabsan goobta iyo badeecadeeda.
Inaadan helin rajadaada Dhamaan talaabooyinkan waxay xaqiijinayaan in website-kaagu heli doonodib u qaabeyn. Si kastaba ha ahaatee, ma dalbanayaan in ay si dhakhso ah u qabtaan. Ha sugin natiijooyinka la taaban karo hal toddobaad ama laba isbuuc: waxaad noqon doontaa niyad jab.
Ka takhalusidda cawaaqibka Google ee mamnuucidda wuxuu kaa qaadi doonaa bil iyo bilooyin shaqo adag, dib u eegis iyofalanqaynta, masruufka iyo taageerada ka hor inta aanad ku faani karin: "Waan samaynay!"
Si kastaba ha ahaatee, weli waa suurtogal in dhamaadka Source . Sidoo kale, dhammaan waxyaabihii wanaagsanaa way ku habboon yihiin halganka, miyaanay ahayn?